by Anuj Bhai September 11, 2020
जोसुकै व्यवसायीले पनि व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अघि व्यवसायको विभिन्न पक्षहरुको अध्ययन गर्नु अति नै जरुरी रहन्छ । किनभने साधारणतय मैले बजारमा यसो हेर्दा प्राय महशुस गर्ने गरेको एउटा कुरा के हो भने कोहि एकजना व्यक्तिले कुनै ठाउँमा कफिशप वा अन्य कुनै व्यवसाय राम्ररी चलाईरहेको हुन्छ । र अर्को एकजना कोहि व्यक्ति छ जो कुनै पनि व्यवसाय सुरुवात गर्ने तरखरमा रहेको छ । उसले धेरै बिचार गरिरहेको हुन्छ कि मैले के व्यवसाय सुरु गर्दा राम्रो होला ?यो होला कि, त्यो होला कि……..अनेक सोच्छ ।
मन त्यसै दोधारमा अल्झिरहेको हुन्छ । यसरि समय त्यतिकै बित्दै जान्छ । र अन्त्यमा उसले वरिपरि हेर्छ । यसो हेर्दा त्यो व्यक्तिले कफिशप मजाले चलाईरहेको देख्छ । पसलमा मान्छेको आवतजावत राम्रै देखिन्छ । चहलपहल, भिडभाड पनि उत्तिकै छ । यो सबै देखेर कफि शप यो ठाउँमा निक्कै राम्रो चल्ने रहेछ ठानेर आफुले त्यहिं कतै वरिपरी उस्तै कफिशप वा रेष्टुरेण्ट व्यवसायको सुरुवात गर्न पुग्छ । तर जब दोश्रो व्यक्तिले पनि उहि ठाउँमा उस्तै व्यवसाय सञ्चालन गर्न थाल्दछ, पहिलेको तुलनामा अघिको सपमा होस् वा नयाँ शप दुवैमा व्यापार कम हुन्छ । किनभने, पहिलो कुरा त ति दुई बिच आफसी प्रतिस्पर्धाको सुरुवात हुन्छ । र अर्को कुरा त्यहाँ हुने उत्कृष्टतामा पनि कमि आउन थाल्दछ । त्यसैले यस्ता सानो व्यवसाय वा सानोतिनो उद्यमहरु नै किन नहोस् सिधा सोच बिचारले सञ्चालन गर्न कठिन अवस्था छ । र यो निक्कै दुःखद कुरा पनि हो ।
अहिले विश्वभर कोभिड १९ को महामारी आएपछि सबै सानो व्यवसायहरु ठप्प अवस्थामा पुगेका छन् । एक अर्काका बीचको प्रतिस्पर्धा पनि सकिएको छ । र यस्तो संकटको बेलामा बिशेष गरी सबैखालको व्यवसायीहरुले सोच्नुपर्ने ३ वटा महत्वपूर्ण कुराहरु आज मैले यो ब्लगमार्फत भन्न गईरहेको छु । र जतिपनि मैले भन्ने यि तीनवटा कुराहरु छन्, त्यसलाई तपाईंले सोच्नुभयो भने, चिन्तन, मनन गर्न सक्नुभयो भने मूलतः तपाईंलाई फाइदा नै पुग्ने छ । र तपाईको व्यवसायलाई राम्रो हुने छ । तपाईले चाहे सानो व्यवसाय गर्नुहोस् वा ठूलो व्यवसाय नै होस् त्यसमा केहि फरक पर्दैन ।
हरेक व्यवसायिले सोच्नुपर्ने ३ वटा महत्वपूर्ण कुराहरु यसप्रकार छन् –
१. प्रडक्ट (Product) : तपाईंको प्रडक्टमाथि तपाईंको अध्ययन हुन अति जरुरी रहन्छ । तपाईंको प्रडक्ट बजारले मागेको छ कि छैन । तपाईंको प्रडक्टमा अरुको तुलनामा के विशेषता छ ? तपाईंको प्रडक्ट कत्तिको महङगो छ ? तपाईको प्रडक्टलाई ग्राहकले सजिलै किन्न सक्छन् वा सक्दैनन् ? कतिपय अवस्थामा आवश्यक भईरहेको प्रडक्ट पनि ग्राहकले महङगीको कारणले किन्न असक्षम भईरहेको पनि हुन सक्छ । त्यसैले तपाईंले ग्राहकहरुको आर्थिक सक्षमतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
२. प्रक्रिया (Process) : दोश्रो कुरा तपाईंले आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउन चाहानुहुन्छ भने ख्याल गर्नुपर्ने अर्को मुख्य कुरा हो प्रक्रिया । तपाईंले आफ्नो सामान बजारमा बेच्नकोलागि कस्तो प्रक्रिया र रणनीति अपनाउनु भएको छ ? सामान बेच्नको लागि कुन किसिमको माध्यम अपनाउनु भएको छ ? जसको माध्यमबाट तपाई सजिलै बजारसम्म जान सक्नुहोस् ।
त्यसकारण पहिलो कुरा आफ्नो प्रडक्टमा त ध्यान दिनैपर्दछ भने दोश्रो कुरा प्रक्रियालाई पनि पूर्ण रुपमा तयारी गर्नैपर्दछ । त्यसैले धेरै व्यवसायी हरुले आफ्नो बिजनेशको लागि अनलाईन मार्केटिङ्गलाई अपनाउन सक्नुहुनेछ । त्यस्तै फेसबुक मार्केटिङ्ग, सोशियल मिडिया मार्केटिङ्गलाई पनि उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ । जसबाट तपाईं सजिलै बजार र ग्राहकसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ । हिजोको समयमा आफ्नो कम्पनिको विज्ञापनको लागि होस् वा सामान बेच्नकोलागि विभिन्न पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, होडिङबोर्डको उपयोग गर्दै आएको देखिन्थ्यो । अझैपनि कतिपय समारोहको विज्ञापन गर्दा सो प्रक्रिया अपनाएको देखिन्छ । यो पनि मार्केटिङ्गको एउटा विधी हो । तर सकेसम्म यो कोभिडको महामारीको अवस्थामा सबै व्यवसायिहरुले सम्भव भएसम्म थोरै लगानीमा धेरै प्रभावकारी रणनीतिहरु अपनाउन सके एकदमै राम्रो र फाईदाजनक पनि रहनेछ ।
तपाईं कस्तो व्यक्तिको साथमा काम गरिरहनुभएको छ ? तपाईंको मेनपावर कस्तो छ ? तपाईं आफ्नो भिजनमा रहेर काम गर्न सक्ने खालको टिम बनाउनुभएको छ कि छैन ? तपाईंको व्यक्तिलाई, टिमलाई नेतृत्व गर्न सक्ने र कुनै काम जिम्मेवारपूर्वक पुरा गर्न सक्ने खालको तालिम दिनुभएको छ कि छैन ?
Sell Your Talent On Internet | आफ्नो दक्षता चिन्नुस, इन्टरनेटमा भब्य बेच्नुस |
३. व्यक्ति (People ) :
यि तीनवटा कुराहरुलाई व्यवसायीहरुले ध्यान दिने, बिचार गर्ने हो भने साँच्चिकै तपाईंले आफ्नो बिजनेशलाई निक्कै राम्रोसंग अगाडि बढाउन सक्नुहनेछ । यो कोभिडको बेला ईन्टरनेटलाई भरपूर रुपमा उपयोग गर्नुहोस् भनेर म उत्साह पनि दिन चाहान्छु । बिषेश गरी आफ्नो टुल्स र प्रडक्टमाथि राम्रारी अध्यायन गर्नुहोस् र प्रडक्टलाई ईन्टरनेटको माध्यमबाट कसरी बजारसम्म पु¥याउने भन्ने कुरामा खोज गर्नुहोस् । र यदि तपाईं आफ्नो बिजनेशलाई फेसबुक मार्केटिङ्ग गर्न चाहानुहुन्छ भने यसकोलागि तपाईंको नजिक रहेको, चिनेको सोशियल मिडिया मार्केटिङ्ग एजेन्सिहरुलाई हायर गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईं अनलाईन सर्भिस लिन चाहानुहुन्छ भने वा अनलाईन मार्फत आफ्नो प्रडक्ट बेच्न चाहानुहुन्छ भने अनुजभाई डट कमलाई फेसबुक मार्फत, ई–मेल मार्फत र फोन मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हाल हामीले नेपालको करिब ४० वटा जिल्ला र विदेशको करिब ९ वटा भन्दा बढि विभिन्न देशहरुमा आफ्नो ईन्टरनेट मार्केटिङ्गको सर्भिस , ईन्टरनेट मार्केटिङ्ग टे«निङ्ग र आफ्नो बिजनेश सर्भिस दिंदै आईरहेका छौं ।
Anuj Bhai Dot Com को निःशुल्क अनलाइन तालिम गर्न चाहानुहुन्छ भने निम्न भिडियो हेरेर एकाउन्ट बनाउनुहोस् र इमेल मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस् ।
Join On Facebook : Click here
Join On Blogging Training : Click here
Join On Free Online Marketing Training : Click here
Create Anuj Bhai Account : Click here
Tags: Anuj Bhai Blog, Anuj Bhai Dot Com, best business in nepal, business idea in nepal, business nepal, Business Tips In Nepal, earn money online in nepal, how to make money online in nepal, Internet Marketing In Nepal, make money online in nepal, Nepalese Internet Marketer Story, small capital business in nepal, top 10 business in nepal